Muuqaal + Sawiro: Mas Caloosha Barartay Meydkiisana Laga Helay South Africa Oo Ay Dhaqaatiirta Amreen In La Qalo Oo Laga Helay Arrin Mucjiso Ah - Hablaha Media Network
Muuqaal + Sawiro: Mas Caloosha Barartay Meydkiisana Laga Helay South Africa Oo Ay Dhaqaatiirta Amreen In La Qalo Oo Laga Helay Arrin Mucjiso Ah
HMN:- Dhowr maalmood kahor ayaa waxaa dalka Koofur Afrika laga helay meyd ka Mas weyn, Maskan dhintay calooshiisa ayaa aheyd mid aad u weyn lamana garaneyn waxa ku jiray maadaama ay aheyd mid aad ugu buuran qeybta dhexe.
Dhaqaatiirta qaabilsan qaliinada dhanka caloosha ayaa sheegay in maskaan uu liqay ama cunay xayawaan kale sidaas darteedna ay calooshiisa weynaatay balse si rasmi ah uma aysan qiyaasin waxa ku jira caloosha maskaan.
Waxa ay ku sameeyeen qaliin oo waxa ay dilaaciyeen caloosha maska balse waxa ay kala kulmeen wax aysan filaneyn.
Gudaha caloosha maska waxaa laga soo saaray kashiido dhirirkeedu yahay 31 Inch halka culeyskeeda lagu sheegay 13 KG. qodxaha uu leeyahay xawayaankan yar ayaa saameyn badan ku yeeshay jidaarada caloosha maska, balse lama garanayo sababta rasmiga ah ee uu u dhintay maskaan.
Arintaan ayaana la yaab ku noqotay dhamaan dadkii soo xaadiray goob joogana u ahaa qaliinkii lagu baarayey waxa ku jiray caloosha maskii meydkiisa laga helay meel kamid ah doorka dalka South Afrika.